Gen Jaqanaf oo sheegay in Amniga Boosaaso Gacan bir ah lagu qabanyo (Dhegayso) – Radio Daljir
Maajo 12, 2015 1:58 g 0
Hawlgal baaxad weyn oo ciidamada Amniga Puntland ka wadaan Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ahna magaalo Ganacsiyeedka Puntland ayaa lagu qabtay boqolaal qof oo ciidamadu qabteen intii hawlgaladu socdeen.
Taliyaha ciidanka Bilayska maamulka Puntland Gen Jaqanaf ayaa shir Jaraa\_’id oo uu ku qabtay magaalada Boosaaso wuxuu ku sheegay in hawlgalkani yahay mid Amniga lagu sugayo magaaladana ay gacan adag ku qaban doonaan.
\_”Arintan waa Sugida amniga magaalada, beryahan waxaa la dhahaa meel heblaa bomb lagu tuuray iyo meel heblaa xabad laga soo tuuray, arintaasi waa dhamaanaysaa magaaladana gacan adag baan ku qabanaynaa,\_” Ayuu yiri Gen Jaqanaf.
Isagoo ka hadlayey sida hawlgalkan Warbaahintu uga hadashay ayuu sheegay in ay jiraan Website yo iyo TV yo baahiya wax lid ku ah Puntland isagoo Hanjabaad xoogan u diray Suxufiyiinta ka hawlgala Warbaahintaasi.
\_”Idaacadaha iyo Website yada wax bay qoraan, waxaa jira Websiteyo ama TV yo qora wax lidi ku ah Puntland, waan uga digaynaa waana is arki doonaa,\_” ayuu hadalkiisa Raaciyey Jaqanaf.
Inkasta oo boqolaal qof lagu qabtay hawlgalkan oo intooda badan wali xabsiyada ku jiraan hadana waxaa magaalada wali kasoo socda qabqabshada dadka ku nool Xaafadaha kala duwan waxaana shacabka Boosaaso sheegeen in Hawlgalkani yahay mid saf balaadhan loo qabqabanyo dadka iyadoo aysan jirin wax dabagal ah oo ciidamadu ku socdaan.